BEERAHA BEERAHA EE NOOCYADA TUFAAXA "QALCADDA QORI": TALOOYIN KU SAABSAN ABUURISTA IYO DARYEELKA - GEED GEEDEEDKA
Kala duwan waxaa loo yaqaan beerta guriga gudaheeda in ka badan boqol sano. Markii hore, waxa uu ku khasbanaaday inuu soo bandhigo beerta oo dhan, iyo maanta waa la ilaaway wax yar sababtoo ah badi noocyo kale oo geedo tufaax ah. Si kastaba ha ahaatee, kuwa ku kalsoonaa isaga, waxay helayaan goosashada tufaax qurux badan leh dhadhan fiican.
Qeexida noocyo tufaax ah "Qoraxi dhuuban"
Si loo qiimeeyo faa'iidooyinka geedkii beerta, waxaa haboon in si taxaddar leh loo barto sharraxaadda noocyada kala duwan ee "Cinnamon Striped".
Geedka wejiga ah ee xoogga leh oo kobcaya wuxuu marka hore soo rogaa sariir ama sharrax leh, taas oo lagu soo koobay wakhti ka dib. Wareer iyo khafiif dheer oo la mid ah hooska mugdiga ah ee madow, waxay ku daboolan yihiin caleenta cagaarka u dhow, korka caleemaha si aan caadi ahayn kor uga soo baxin.
Waxaa lagu gartaa midab cagaaran oo madow, qaab muuqaal ah, geeso jug leh, dusha sare iyo wax yar oo dheecaan ah. Dhirta geedka tufaaxa "Cinnamon Striped" ayaa ka badan celceliska, kaas oo loo baahan yahay in la tixgeliyo marka la beero.
Sidoo kale waxaad ka akhrisan kartaa noocyada soo socda: "Berkutovskoe", "Currency", "Sun", "Zhigulevskoe", "Northern Synapse", "Sinap Orlovsky", "Filling White", "Silver Hoof", "Orlik" "Streyfling", "Semerenko", "Gloucester".
Ubaxa wuxuu u muuqdaa guga: caddaan iyo casaan, cabbir dhexdhexaad ah, tufaax ayaa yar yar xiran. Waxay leeyihiin caro joogto ah oo adag oo si firfircoon u soo jiidata cayayaanka.
Midhaha ugu horeysa waxay ka muuqanayaan geedka sannadkii lixaad ee noloshiisa, laakiin aad u yar. Khudbada dhabta ah ee wanaagsan ayaa laga goyn karaa sanadka tobnaad ee nolosha geedka.
Xilliga Biyaha ee tufaaxa "Cinnamon Striped" ayaa loo tixgeliyaa gaaban. Midhaha ugu horreysa waxay u bislaadaan bisha Sebtembar. Waxay ka samaysan yihiin laanta oo dhan, laakiin kaliya at dhamaadka caleemaha, sidaa daraadeed way adagtahay in la sifadeeyo noocyada kala duwan si sare.
Ma taqaanaa? Markii ugu horreysay, V. A. Levshin wuxuu xusuusiyaa noocyada kala duwan ee shaqadiisa "Gobalka, ama Tababarka Dhaqanka ee Qeybaha Beeraha" laga bilaabo 1810. 38 sano ka dib, geedka miro-geedeedka Moscow N. A. Krasnoglazov ayaa si faahfaahsan u sharxay. Laakiin waxaa la aaminsan yahay in noocyada kala duwan ay u muuqdeen kuwo horay u madax bannaan, sababtoo ah pollination dabiiciga ah.
Si kastaba ha noqotee, miisaanka celceliska miraha waa 70-90 g, si kastaba ha ahaatee, tufaaxa waxaa lagu daadin karaa ilaa 120 g Marka ugu horeysa waxaa lagu rinjiyeeyaa midab cagaaran, iyo sida ay u bislaadaan waxay u beddelaan si huruud ah oo leh jilicsan iyo casaan.
Jirka waa mid huruud ah, casaan ka yar maqaarka caadiga ah, halkii cufan. Dhadhanka tufaaxa waa macaan, casiir leh, ugxan iyo dhadhan qafiif ah ee qorfe. Faa'iidooyinka "Cinnamon Striped" tufaaxa jirka ma aha oo kaliya maadada sare ee fiitamiinada, laakiin sidoo kale macdanta calorie ee la aqbali karo - qiyaastii 45 kcal halkii 100 g oo miro ah.
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka kala duwan ee "qoriga oo dhoobo"
Sida noocyo kala duwan oo kale, waxay leedahay dhinacyo fiican iyo diidmo, taas oo loo doortay ama beeraleydu diidaan inay la shaqeeyaan. Faa'iidooyinka ay kala duwan yihiin waxaa ka mid ah:
awoodda loo leeyahay inay la qabsadaan xaalad kasta oo cimilada ah (noocyo kala duwan oo miro ah oo ku yaalla gobollada koonfurta iyo waqooyiga ee dalka);
wuxuu leeyahay caabbi aad u sareeya (xitaa ka sarreeya "Anis" ama "Antonovka");
miraha waxay leeyihiin nolol shelf dheer (qiyaastii 2-3 bilood);
waxay ku kala duwan yihiin ari udgoon oo macaan iyo dhadhan;
dibadda u eegto mid aad u soo jiidasho leh.
Waxaa ka mid ah cilladaha kala duwan ee soo socda:
maaddaama taajkii geedku uu aad u ba'an yahay, waxay u baahan tahay meel ballaaran oo koritaan ah;
u nugul ciyaalka caadiga ah;
haddii uurjiifku helo dhaawac yar oo farsamo ah, si dhakhso ah ayuu uga sii darayaa;
miraha waxay leeyihiin wax yar oo ah fitamiin C;
mudada gaaban ee gelitaanka fruiting;
Tufaax Dheer "Cinnamon striped" hooseeya, illaa 150 kg sannadkii muddadii ugu fiicnayd, miisaanka tufaaxuna waa yar yahay.
Waa muhiim! Mararka qaar geed ayaa leh marar badan oo fruiting badan. Xaaladaha noocaas ah, taageerooyinka waa in lagu dhejiyaa laanta hoosaadyada, maadaama ay badanaa ku adkeysanayaan darnaanta dalagga.
Diiditaanka geedka tufaaxa "Qalcadda qoyan"
Kala duwanaantu ma aha mid iskeed-pollinating, waa geed is-bacrin ah. Si aad u hesho goosashada, waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero noocyo kale oo geedo tufaax ah oo agtooda ah.
Noocyada deriska ah sida Moscow Pear iyo Papirovka ayaa si fiican u saameeya dhalidda dalagga.
Hab kale oo caawinaya in la isku dhajiyo dhalidda ee kala duwan waa apiary, kaas oo ah in la dhigo meel u dhow geedkii tufaaxa ama meel fog.
Ma taqaanaa? "Cinnamon striped" waxa uu noqday aabaha ugu yaraan 20 noocyo kale oo hadda caan ah: "Aelita", "Cypress", "Farxad dayrta", "Medunica" iyo kuwa kale. Laakiin kuwa ugu caansan ayaa weli ah "Kalluunka qoriga" iyo "Sumaha qamriga". Ma aha oo kaliya inay leeyihiin midabka quruxda badan ee miraha, geedaha tufaaxa naftooda waxay u adkeysanayaan dhowr cudur oo.
Sida loo soosaaro noocyo geedo tufaax ah "Cinnamon striped"
Si aad u tufo "qoraxda dhoobo" waxay siisay dhalid wanaagsan, waxaa muhiim ah in si habboon loo beero oo loo daryeelo. Sida loo sameeyo, waxaan fahmi doonnaa dheeraad ah.
Waqtiga iyo meesha loo dego
Waqtiga ugu fiican ee lagu beeri karo tufaaxa noocyada kala duwan waxay ka bilaabantaa April 20 ilaa May 15. Waxaad kaloo ku dhici kartaa dayrta, laga bilaabo Sibtember 10 ilaa Oktoobar 15. Geedo beerto waxay suurtagal tahay guga iyo dayrta. Laakiin haddii aadan abuuri karin seedling waqtigaan, waxaad ku baari kartaa goobta oo aad ka bixi kartaa ilaa guga, ka dibna lagu beeray si waafaqsan shuruudaha oo dhan.
Wixii darajo ku habboon si fiican u daadi, miiray, ciidda bacrin ah. Sidaa daraadeed, fasalka ugu fiican wuxuu dareemaa ganaax, loamy, chernozem leached acid with acidity dhexdhexaad ah. Haddii ciidda ay tahay mid aad u cufsan, waxaad u baahan tahay inaad samayso Bacriminta macdanta.
Qiyaasta qoto dheer ee dhulka hoose. Waxaa muhiim ah in aanay ku dhowdahay 3 mitir oo dusha sare ah, haddii kale nidaamka xididka geedka ayaa waxyeello gaarsiin doona, taas oo saameyn doonta dhalidooda iyo xaalad guud.
Shuruudo kale - tufaax laga sameeyo "Cinnamon striped" waa in lagu fuliyaa meel laga ilaaliyo dabaysha. Way ku adag tahay geedaha yaryar inay la qabsadaan dhulalka dabaylaha xooggan. Sidoo kale goobta waa in ay ahaato iftiin ku filan. Qadar yar oo qorraxda qorraxda wax u dhimeysa koritaanka geedaha. Laakiin beergooyska ayaa lumin doona sonkorta.
Wixii geedo beerto waxay u baahan yihiin inay qodaan dalool meelo la doortay. Waa inay ahaataa cabbirka isku midka ah ee dhoobo dhoobo ah, oo leh qoto dheer oo ku dhow nuska mitir. Laakiin haddii aan ka hadlayno ciidda bacaadka ah, waxaa lagu qodayaa ilaa mitir laba jibbaaran. Kadibna geedku wuxuu heli doonaa macdano iyo qoyaan.
Waa muhiim! Haddii ceelku ka weyn yahay, abuurka ayaa kordhin doona cagaarka cagaaran, oo ma samaysan midho.
Qeybta hoose ee ceelka ayaa isku dar ah isku dar ah 3 kg of vermicompost iyo 3-4 kg ee digada. Waxay ka ilaalin doonaan xididada laga bilaabo qaboobaha jiilaalka ugu horeeya, marka dhirta aan weli ku habboonayn xaaladaha cusub.
Dhirta Apple "Cinnamon striped" ka hor inta beerto sidoo kale u baahan tahay in la diyaariyo. Si aad si fiican u kobciso taajka, waa lagama maarmaan in la gooyo laanta. Laantu waa in laga nadiifiyaa caleenta qiyaastii illaa 90%, mid kasta oo caleemo saaraya.
Geedo tiknoolaji ah
Geedka loo diyaariyey waxaa la dhigayaa daloolka iyo xididada waxaa lagu toosiyaa gudaha si aanay u wada koraan oo aysan wax is dul saarin. Markaas xididada waxaa lagu daboolay dhulka. Qoorta xididka waa in loo jeestaa koonfurta oo kordhi 5-7 cm korka dusha sare.
Dhulka dhulka ku wareegsan waa inuu si adag u dhuujiyaa, ka dhigaa hareeraha hareeraha, sababtoo ah muddo ka dib dhulku wuu degi doonaa, tuulkuna wuxuu u eg yahay dhulka. Hadda meesha cirifka ah waa in lagu daadiyaa si ballaaran oo ku saabsan baaldi biyo ah, iyo in ka badan. Geedka waa in la xiraa si aan dabayshu u jabin.
Sida loo daryeelo tufaaxa "qoraxda dhoobo"
Waxsoosaarka geedaha beerta waxaa saameyn ku leh farsamada beeraha ee habboon ee beerashada tufaaxa. Maxay yihiin sifooyinka soo koraya kala duwanaanshahan?
Immisa jeer ayaa la qaadaa waraabinta
Marka ugu horeysa, waxaa muhiim ah in geedku si sax ah u socdo iyo inta jeer ee loo baahdo. Waa lagama maarmaan in la qaato bil gudaheeda ugu yaraan afar jeer: laba baaldiyaal oo subax ah iyo laba baaldiyaal fiidkii. Wareeg yar oo soo noqnoqda ah waa inay noqotaa inta lagu jiro gelinta burooyinkeeda xilli-xiga (Julaay iyo Agoosto), iyo sidoo kale inta lagu jiro Bisaylkiisa midhaha (Agoosto - Sebtembar).
Waraabinta waraabka waa habka ugu waxtarka badan ee waraabinta, oo aad adigu ka dhigi karto dhalooyin caag ah.
Bishii Sebtembar, waraabinta si tartiib tartiib ah ayaa loo yareeyaa si biyaha aysan u ururin ciidda ka hor xilliga qaboobaha. Halkii, ka hor qabow, goobada pristvolny waa suurad wacan in la mulched kula digada ama sida balka. Si kastaba ha ahaatee, haddii xagaaga waa runtii roobab, waxaa fiican in aan ku lug yeelan waraabka, sida xad-dhaaf ah qoyaani doonaa burburin doona geedka tufaaxa.
Dharka ugu sarreeya iyo bacriminta ee geed-tufaax ah ayaa lagu fuliyaa guga iyo dayrta. Guga, digada ayaa loo isticmaalaa, qiyaastii 5-10 kg halkii mitir labajibbaaran. Waxaa lagu daraa 40 g oo amooniyam ah oo leh nitroammofoskoy ama 500 g oo ah HOL. Xilliga dayrta, waxaa lagu talinayaa in lagu dabaqo bacriminta macdanta yar ee nitrogen-free loogu talagalay geedo midho leh.
Sannad kasta waa in la gooyaa. Tani waxay kordhin doontaa dhalidda geedka, dhadhanka midhaha, guud ahaanna hagaajinta geedka. Daryeelidda geed geedka tufaaxa ah waxaa ka mid ah manjooyin guga, kaas oo lagu qabtey Abriil ka hor inta uusan ubaxyada ubaxin.
Marka hore, dhammaan bukaanka, bukaanka qallalan iyo kuwa la qalajiyey ayaa la gooyaa guga. Sidoo kale jarjar laamiyey oo dhulka ku tiirsan. Haddii aan la sameynin, xilliga dayrta waxay jebin karaan midhaha hoosteeda, waxyeello gaarsiisan, iyadoo cudurada kala duwan ay geli karaan.
Si wadajir ah iyaga iyo iyaga waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro jilif dhintay, kaas oo noqon doona ka hortag ah oo fiican ee cudurada fangas. Ugu dambeyntii, waa in ay jirtaa oo ay jirtaa laan adag.
Waa muhiim! Isla markiiba waxaad ka saari kartaa wax aan ka badnayn rubuc ka mid ah dhammaan laamaha, haddii kale geed ayaa laga yaabaa inay xanuunto.
Cadaadiska cayayaanka iyo cudurrada, dagaalka lagula jiro xaalad guul daro
Tan iyo noocyada kala duwan ee dabiiciga ah, oo aan dabiiciga aheyn, ma laha difaac u ah cuduro kala duwan kuwaas oo caan ku ah geedaha tufaaxa. Sidaa daraadeed, waa muhiim in la fuliyo ka hortagiddeeda, la socoshada geedka iyo waqtigeeda si wax looga qabto calaamadaha ugu horreeya ee cudurka.
Cayayaanka cayayaanka ayaa inta badan saameynaya nuugista geedka, aphids, oo ay la halgamayaan benzophosphate. Si arrintan loo sameeyo, waa in lagu dhajiyo 60 g of daroogada baaldi biyo ah iyo buufin geedka. Markii hore waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro cayayaanka hore.
Si loo ilaaliyo miraha tufaaxa ee cayayaanka ayaa ka caawin doona daawooyinka gaarka ah - sunta cayayaanka, "Nuris D", "Actofit", "Kinmiks", "Calypso", "Bitoksibatsillin", "Karbofos", "Inta badan", "Komandor".
Sidoo kale cayayaanka miro caska ah waxay weerari karaan geed. Si loola dagaallamo, isticmaal xal 250 g of nitrophene baaldi biyo ah, kaas oo lagu buufin guga ka hor kelyaha barara. Isla mar ahaantaana, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daweeyo geed leh xal of chlorophos (25 g halkii baaldi biyo ah), taas oo ka hortagi doona muuqaalka ah ee caleen iyo savetoeda.
Cayayaanka kale ee badanaa waxyeeleeya geedka waa aboor ku qaylinaya. Si looga takhaluso, isticmaal suumanka la yaqaan ee dabka. Si ay u sameeyaan, waxay qaataan warqad, ku duub sadex lakab oo ku hagaaji sanduuqa ka dib ubaxyada ubaxa.
Cayayaanka ayaa ku faafaya gudaha dildilaaca, ka dib markii suunka la saaro, la gubo, iyo mid cusub ayaa lagu meeleeyaa meeshiisa. Sida qiyaas ka hortag ah, dayrta, caleemaha iyo miraha dhicisoobay, kaas oo cayayaanka ay u dhici karto hibernate, laga saaro geed ka yar.
Laga soo bilaabo cudurrada geedka waxay inta badan leeyihiin jeexdo budo ah, qolof. Sida qiyaas ka hortag ah, geedaha guga waxaa lagu daaweeyaa dareeraha Bordeaux 3% oo leh copper, chloride potassium 10% ama xal of HOL leh 7%.
Sidoo kale qoorta xididka ama xididada qudhooda ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan waxbarasho - kansarka xididada loogu yeero. Waa in la gooyaa by jeermiska qaybaha leh xal 1% oo ah naxaas sulfate (100 g baaldi biyo ah). Si looga hortago cudurka cytosporosis, jirridda waxaa lagu buufiyaa sulphate copper 1%.
Waxaad la dagaalami kartaa cudurrada tufaaxa adoo caawinaaya fungicides soo socda: Antracol, Thiovit Jet, Sulfur Colloid, Xom, iyo Scor.
Waqti goynta iyo kaydinta beergooyska ee noocyo tufaax ah "qoraxda dhoobo"
Tufaaxu wuxuu dillaacaa dhammaadka bisha Agoosto, iyo horraantii Sebtembar, waxaad qaban kartaa goosashada weyn. Goynta waa in si taxadar leh loo sameeyaa si aanay u dhaawacin midhaha - gaadiidka tufaaxa "Cinnamon Striped" waa mid aad u hooseeya. Sababtoo ah dhaawaca ugu yar, tufaaxu si dhakhso ah ayuu uga sii darayaa. Ku rid kiisaska alwaax ama ku dhaji dharka.
Ku kaydi miraha qol qabow leh heerkul ah 0-4 ° S oo leh qoyaan yar. Waa lagama maarmaan inaad si joogto ah u hubiso beergooyska iyo ka qaad miro khafiif ah waqtigii loogu talagalay, haddii kale miraha si dhakhso ah ayuu u baaba'ayaa dhammaan. Iyadoo kaydinta saxda ah, waxay ku jiifsan kartaa 2-3 bilood, ilaa December - Janaayo.
In kasta oo xaqiiqda ah in culeyska tufaaxa "qoraxda dhoobo" uu hooseeyo, dhaliddu way yar tahay, kala duwanaantu waxay caan ku tahay inuu bannaanka u yahay - dhadhankiisu waa mid aad u fiican. Daryeelidda geedka ma fududa, badanaa waxaa sabab u ah difaaca jirka ee hooseeya cudurada iyo cayayaanka. Hase yeeshe, ninkii beerta ka shaqeeyaa oo leh waayo-aragnimo ayaa si fudud ula qabsan doona hawshan.